खोज पवित्र बाइबल - नेपाली बाइबल 2008
मिली १५९ ~ मत्ती, मार्क, लूका, János, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
तर म तिमीहरूलाई भन्‍छु, शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर। आफूलाई खेदो गर्नेहरूका निम्‍ति प्रार्थना गर।
“तिमीहरू प्रार्थना गर्दा कपटीले जस्‍तो प्रार्थना नगर। तिनीहरू त अरू मानिसले देखून् भनेर सभाघर र बाटोको छेउछाउमा उभिएर प्रार्थना गर्न मन पराउँछन्। साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, तिनीहरूले पाउनुपर्ने जति आफ्‍नो इनाम पाइसकेका हुन्‍छन्।
तिमीचाहिँ प्रार्थना गर्ने बेलामा कोठाभित्र पसी ढोका थुनेर गुप्‍तमा हुनुहुने तिम्रा परमेश्‍वर पितासँग प्रार्थना गर अनि गुप्‍तमा गरेको काम देख्‍नुहुने पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।
“परमेश्‍वरलाई नचिन्‍ने अन्‍यजातिहरूले गरेजस्‍तो नचाहिँदोसँग बरबराएर प्रार्थना नगर। तिनीहरू त लामो-लामो प्रार्थना गरेदेखि पो उत्तर पाइन्‍छ भन्‍ने विचार गर्छन्।
तिमीहरूले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्ने गर— “हे स्‍वर्गमा हुनुहुने हाम्रा परमेश्‍वर पिता, तपाईंको नाउँ पवित्र गरियोस्।
तिनीहरूलाई बिदा गरिसकेपछि उहाँ एक्‍लै प्रार्थना गर्न माथि डाँडामा जानुभयो। रात पर्‍यो र येशू एक्‍लै डाँडामा हुनुहुन्‍थ्‍यो।
[तर त्‍यस किसिमको भूत त प्रार्थनाद्वारा र उपवास बसेर मात्र निकाल्‍न सकिन्‍छ।”]
त्‍यस बेला येशूले आफ्‍ना हात राखेर आशिष् देऊन् र प्रार्थना गरून् भनेर मानिसहरूले आफ्‍ना केटा-केटीहरूलाई उहाँकहाँ ल्‍याए। यो देखेर चेलाहरूले ती मानिसहरूलाई हप्‍काए।
अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “धर्मशास्‍त्रमा यस्‍तो लेखिएको छ— ‘मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलिनुपर्छ।’ तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको ओडार पो बनाएका छौ!”
यदि विश्‍वास गर्‍यौ भने प्रार्थनामा जे मागे पनि तिमीहरूले त्‍यो पाउनेछौ।”
[“ए धर्म-गुरु र फरिसीहरू हो! तिमीहरूलाई धिक्‍कार! तिमीहरू त कपटी छौ। तिमीहरूले विधवाहरूको घरबार खोस्‍छौ र अझै देखाउनलाई लामा-लामा प्रार्थना पो गर्छौ। यसैकारण तिमीहरूले भयङ्कर दण्‍ड पाउनेछौ।]
जाडो महिना र विश्रामको दिनमा भाग्‍नुनपरोस् भनेर तिमीहरूले परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर
त्‍यसपछि येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग गेतसमनी भन्‍ने बगैँचामा जानुभयो। त्‍यहाँ पुगेर उहाँले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू यहीँ बसिराख है, म अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु।”
उहाँचाहिँ अलिक पर गएर भूइँमा घोप्‍टो परी यसो भन्‍दै प्रार्थना गर्न लाग्‍नुभयो, “हे मेरा पिता, हुन सक्‍छ भने यो दु:खको घुट्को मबाट हटाइदिनुहोस्। तरै पनि मेरो इच्‍छा त होइन, तपाईंकै इच्‍छा पूरा होस्।”
तिमीहरू ‘आइपर्ने जाँचको बेला पापमा नफसौं’ भनी जागै बसेर प्रार्थना गर। साँच्‍चै आत्‍माचाहिँ तयार छ, तर शरीर भने कमजोर छ।”
फेरि गएर येशूले दोस्रोपल्‍ट यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, “हे मेरा पिता, यो दु:खको घुट्को मैले नलिई नहुने भए, तपाईंकै इच्‍छा पूरा होस्।”
अनि येशूले तिनीहरूलाई त्‍यत्तिकै छोडेर गई तेस्रोपल्‍ट फेरि अघिजस्‍तै प्रार्थना गर्नुभयो।
भोलिपल्‍ट बिहान उज्‍यालो नहुँदै येशू उठेर एकान्‍त ठाउँमा गई प्रार्थना गर्न लाग्‍नुभयो
तिनीहरूलाई बिदा गरिसक्‍नुभएपछि उहाँ प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्‍लनुभयो।
त्‍यस किसिमको भूत त प्रार्थनाद्वारा मात्र निकाल्‍न सकिन्‍छ, अरू कुनै उपाय छैन भनेर येशूले जवाफ दिनुभयो।
त्‍यसपछि उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिंदै भन्‍नुभयो, “के धर्मशास्‍त्रमा यसरी लेखिएको छैन र— ‘मेरो घर सबै जातिका मानिसहरूको लागि प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ’? तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको ओडार बनायौ।”
तिमीहरू प्रार्थना गर्न लाग्‍दा यदि तिमीहरूको कसैप्रति तीतोपना छ भने उसलाई क्षमा देओ। अनि स्‍वर्गमा बास गर्नुहुने तिमीहरूका परमेश्‍वर पिताले पनि तिमीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ।
तिनीहरूले विधवाको घरबार खोस्‍छन् र अझै देखावटी गरेर लामा-लामा प्रार्थना गर्दछन्। त्‍यस्‍ताहरूले झन् ठूलो सजाय पाउनेछन्।”
यी कुराहरू जाडो महिनामा आइनपरून् भनेर परमेश्‍वर पितासँग प्रार्थना गर।
त्‍यसपछि येशू आफ्‍ना चेलाहरूसँग गेतसमनी भन्‍ने बगैँचामा जानुभयो। त्‍यहाँ पुगेर उहाँले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “मैले प्रार्थना गरुञ्‍जेल तिमीहरू यहीं बसिराख।”
उहाँचाहिँ अलिक पर गएर भूइँमा घोप्‍टो परी ‘हुन सके आउन लागेको कष्‍टको समय मदेखि हटोस्’ भनेर प्रार्थना गर्न लाग्‍नुभयो।
उहाँले यसो भन्‍दै प्रार्थना गर्नुभयो, “हे पिता, हे मेरा पिता, तपाईंले सबै कुरा गर्न सक्‍नुहुन्‍छ। अबचाहिँ यो दु:खको घुट्को मबाट हटाइदिनुहोस्। तर पनि मेरो इच्‍छा त होइन, तपाईंकै इच्‍छा पूरा होस्।”
तिमीहरूले ‘आइपर्ने जाँचको बेला पापमा नफसौं’ भनी जागै बसेर प्रार्थना गर। साँच्‍चै आत्‍माचाहिँ तयार छ, तर शरीर भने कमजोर छ।”
फेरि गएर येशूले अघिकै कुरा दोहोर्‍याएर प्रार्थना गर्नुभयो।
सबै मानिसले बप्‍तिस्‍मा लिंदैगर्दा येशूले पनि बप्‍तिस्‍मा लिनुभयो र उहाँले प्रार्थना गरिरहँदा स्‍वर्ग उघ्रियो
तर उहाँचाहिँ सुनसान ठाउँहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्‍थ्‍यो।
कति मानिसहरूले येशूलाई भने, “यूहन्‍नाका चेलाहरू सधैँजसो उपवास बस्‍छन् र प्रार्थना गर्छन्। फरिसीका चेलाहरू पनि त्‍यसै गर्छन्, तर तपाईंका चेलाहरूचाहिँ खानपिन मात्र गर्छन्।”
एक दिन येशू डाँडामा गएर रातभरि परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्नुभयो।
तिमीहरूलाई सराप्‍नेहरूलाई आशीर्वाद देओ। तिमीहरूलाई कसैले नराम्रो गर्छ भने उसको भलाइको लागि प्रार्थना गर।
येशू एकपल्‍ट एक्‍लै प्रार्थना गरिरहनुभएको बेलामा चेलाहरू पनि उहाँकै छेउमा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्‍नुभयो, “मानिसहरूले मलाई को हो भन्‍छन्?”
यी कुरा भनेको प्राय: एक हप्‍तापछि पत्रुस, यूहन्‍ना र याकूबलाई लिएर येशू पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो।
उहाँले प्रार्थना गरिरहनुभएको बेलामा उहाँको अनुहार भिन्‍नै भयो र उहाँको लुगा सेतो र चहकिलो भएर आयो।
एकपल्‍ट कुनै एक ठाउँमा प्रभु येशू प्रार्थना गरिरहनुभएको थियो। प्रार्थना गरिसक्‍नुभएपछि उहाँका एउटा चेलाले भने, “प्रभु, यूहन्‍नाले आफ्‍ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाएजस्‍तै हामीलाई पनि सिकाउनुहोस्।”
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूले यसरी प्रार्थना गर— हे परमेश्‍वर पिता, तपाईंको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईंको राज्‍य आओस्,
त्‍यसपछि येशूले चेलाहरूलाई ‘सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ र हरेस खानुहुँदैन’ भनेर बुझाउन यसो भन्‍नुभयो,
“फरिसी र कर उठाउने दुई मानिस मन्‍दिरमा प्रार्थना गर्न गए।
फरिसीले अलग्‍गै उभिएर यसरी प्रार्थना गर्‍यो, ‘हे पिता, म तपाईंलाई धन्‍यवाद चढाउँछु किनकि म अरू मानिसजस्‍तो लोभी र बेइमानी छैनँ। मैले व्‍यभिचार गरेको छैनँ। म यो कर उठाउने मानिसजस्‍तो छैनँ।
“धर्मशास्‍त्रमा यस्‍तो लेखिएको छ— ‘मेरो घर प्रार्थनाको घर हुनुपर्छ।’ तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको ओडार बनायौ।”
तिनीहरूले विधवाको घरबार खोस्‍छन् र देखाउनको लागि लामा-लामा प्रार्थना गर्छन्। त्‍यस्‍ताहरूले ठूलो सजाय पाउनेछन्।”
त्‍यसैले चनाखो भएर बस। ‘ती सबै डरलाग्‍दा कुराहरूबाट बाँचेर मानव पुत्रको सामुन्‍ने उभिन सक्‍ने शक्ति हामीहरूलाई दिनुहोस्’ भनेर परमेश्‍वरसँग सधैँ प्रार्थना गर।”
तर तिम्रो विश्‍वास नहराओस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु। फेरि मकहाँ फर्केपछि तिमीले आफ्‍ना दाजुभाइहरूलाई पनि दरिलो पार्नुपर्छ।”
त्‍यस ठाउँमा पुगेर उहाँले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “जाँचमा तिमीहरूले फस्‍नुनपरोस् भनेर प्रार्थना गर।”
त्‍यसपछि येशू अलिक पर गएर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न लाग्‍नुभयो।
उहाँको हृदय ज्‍यादै कष्‍टले भरिएको थियो अनि उहाँले अझै धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँको पसिना रगतको थोप्‍लाझैँ भूइँमा चुहुँदै थियो।
येशू प्रार्थनाबाट उठेर चेलाहरू भएको ठाउँमा फर्केर आउनुहुँदा तिनीहरू आफ्‍नै शोकले थाकेर सुतिरहेका थिए।
उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू किन सुतिरहेका छौ? उठ र आइपर्ने जाँचको बेलामा पापमा फस्‍नु नपरोस् भनेर प्रार्थना गर!”
तिनीहरू केही दिदी-बहिनीहरू र येशूकी आमा मरियम र उहाँका भाइहरूसँग जम्‍मा भएर प्रार्थनामा लागिरहन्‍थे।
[24-25] तिनीहरूले यसरी प्रार्थना गरे, “हे प्रभु, तपाईंले सबै मानिसको हृदयमा भएको कुरा जान्‍नुहुन्‍छ। यसकारण प्रभु, हामीलाई देखाउनुहोस्, यी दुईमध्‍ये प्रेरित भएर सेवा गर्न तपाईंले कसलाई चुन्‍नुभएको छ। कारण यहूदाले चाहिँ यस कामलाई छोडेर जहाँको थियो, त्‍यही ठाउँमा गयो।”
तिनीहरू प्रेरितहरूसँग सिक्‍ने, संगति गर्ने, भोजमा भाग लिने र प्रार्थनामा लगातार लागिरहने गर्दथे।
एक दिन पत्रुस र यूहन्‍ना दिउँसो तीन बजेतिर मन्‍दिरमा प्रार्थना गर्न जाँदै थिए। यो प्रार्थनाको समय थियो।
यस्‍तो कुरा सुनेपछि तिनीहरू सबै मिलेर परमेश्‍वरसँग यसरी प्रार्थना गर्न लागे, “हे सर्वशक्तिमान् प्रभु परमेश्‍वर, आकाश, पृथ्‍वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक तपाईंले नै बनाउनुभयो।
यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्‍लियो। तिनीहरू सबै पवित्र आत्‍माले भरिए र तिनीहरूले परमेश्‍वरको वचन नडराइ सुनाउन थाले।
हामी आफैंचाहिँ पूरै समय प्रार्थना र प्रचारको काममा लाग्‍नेछौं।”
तिनीहरूले ती चुनिएका सात जनालाई प्रेरितहरूको सामने लगे र प्रेरितहरूले प्रार्थना गरेर आफ्‍ना हात तिनीहरूमाथि राखे।
सामरिया सहरमा आइपुगेपछि पत्रुस र यूहन्‍नाले प्रभुमा विश्‍वास गरेका मानिसहरूले पवित्र आत्‍मा पाऊन् भनेर प्रार्थना गरे
अब ‘मैले दुष्‍ट विचार गरेको छु’ भन्‍ने कुरा मानिलिएर यस्‍तो विचार गर्न छोडी परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्‌। सायद उहाँले तेरो यस्‍तो विचारलाई क्षमा दिनुहुन्‍छ।
यो सुनेर सिमोनले पत्रुस र यूहन्‍नालाई भन्‍यो, “तपाईंले भन्‍नुभएका यी सबै कुरा ममाथि आइनलागोस् भनेर दया गरी तपाईंहरूले नै मेरो लागि प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिनुहोस्।”
प्रभुले भन्‍नुभयो, “उठेर सीधा भन्‍ने गल्‍लीमा जा र त्‍यहाँ यहूदाको घरमा टार्सस सहरबाट आएको शाऊल भन्‍ने मानिसको खोजी गर्‌। त्‍यहाँ उसले प्रार्थना गरिरहेको छ।
पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई कोठाबाट बाहिर निकालेर घुँडा टेकी प्रार्थना गरे। त्‍यसपछि उनले लाशतिर फर्केर भने, “ए तबीता, उठ!” तिनले आँखा उघारिन् र पत्रुसलाई देखी उठेर बसिन्।
उनी परमेश्‍वरका भक्त थिए। उनी र उनको परिवार परमेश्‍वरको डर राख्‍ने मानिसहरू थिए। उनले खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई उदार चित्तले सहायता गर्थे र सधैँ परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्थे।
डरले स्‍वर्गदूतलाई हेरेको हेरेकै भएर कर्नेलियसले भने, “आज्ञा होस् हजुर!” स्‍वर्गदूतले भने, “तिम्रा प्रार्थनाहरू र तिमीले गरीबहरूलाई गरेको दयाका कामहरू परमेश्‍वरकहाँ पुगेका छन्। यी सबैको उहाँले याद राख्‍नुभएको छ।
भोलिपल्‍ट दिउँसो बाह्र बजेतिर तिनीहरू योप्‍पा सहरको नजिक आइपुगे। त्‍यति बेला पत्रुस घरको छतमा प्रार्थना गर्न उक्‍ले।
प्रार्थना गर्दागर्दै उनलाई भोक लाग्‍यो र खाना तयार भइरहेको बेला पत्रुसले ध्‍यान-मग्‍न भएर एउटा अचम्‍मको कुरा देखे–
कर्नेलियसले भने, “चार दिन अघिको कुरा हो। दिउँसो तीन बजेतिर म घरमै प्रार्थना गर्दै थिएँ। अचानक चम्‍किलो लुगा लगाएका मानिसले मेरो सामुन्‍ने उभिएर भन्‍नुभयो,
‘ए कर्नेलियस, परमेश्‍वरले तिम्रो प्रार्थना सुन्‍नुभएको छ र तिमीले गरीबहरूलाई गरेको दयाको कामलाई याद गर्नुभएको छ।
“म योप्‍पा सहरमा हुँदा प्रार्थना गर्दै थिएँ। मैले ध्‍यानमग्‍न भएर यस्‍तो एउटा दर्शन देखें। स्‍वर्गबाट एउटा ठूलो तन्‍नाजस्‍तो चीज चार कुनामा समातिएर मतिर झरिरहेको देखें। त्‍यो आएर मेरो छेवैमा रोकियो।
पत्रुस झ्‍यालखानभित्र कैद हुँदा मण्‍डलीले एउटै मनका भएर तिनको लागि परमेश्‍वरसँग लगातार प्रार्थना गरिरहेका थिए।
यो कुरा बुझेपछि उनी मरियमको घरमा गए। मरियमचाहिँ मर्कूस भनिने यूहन्‍नाकी आमा थिइन्। मरियमको घरमा धेरै मानिसहरू जम्‍मा भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए।
तिनीहरू उपवास बसेर प्रार्थना र प्रभुको आराधना गरिरहेका बेलामा पवित्र आत्‍माले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “सुन, बारनाबास र शाऊललाई मैले जुन कामको लागि चुनेको छु, त्‍यही कामको लागि छुट्ट्याओ।”
तिनीहरूले फेरि उपवास बसे र प्रार्थना गर्दै ती दुई जनामाथि आफ्‍ना हात राखे र तिनीहरूलाई प्रभुको काममा पठाए।
तिनीहरूले प्रत्येक मण्‍डलीमा धर्म-गुरूहरू नियुक्त गरिदिए अनि उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै ती चेलाहरूलाई आफूले विश्‍वास गरेका प्रभुको चरणमा सुम्‍पिदिए।
नदीको किनारमा यहूदीहरूको प्रार्थना गर्ने ठाउँ होला भन्‍ने सम्‍झेर हामी विश्रामको दिन त्‍यहाँ गयौं अनि त्‍यहाँ भेला भएका स्‍त्रीहरूसँग कुरा गर्न लाग्‍यौं।
एक दिन प्रार्थना गर्ने ठाउँमा जाँदा हामीहरूले एउटी कमारी केटीलाई भेट्यौं। उसलाई दुष्‍ट आत्‍मा लागेको थियो र त्‍यही दुष्‍ट आत्‍माको शक्तिले उसले मानिसको भाग्‍य बताइदिएर आफ्‍ना मालिकहरूलाई धेरै पैसा कमाएर दिन्‍थी।
आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्‍वरको भजन गाइरहेका थिए। अरू कैदीहरूले चाहिँ सुनिरहेका थिए।
यति भनेर पावलले सबैसँग मिलेर घुँडा टेकी प्रार्थना गरे।
तैपनि एक हप्‍ता जति बसेपछि हामी उनीहरूसँग बिदा भएर हिँड्यौं। त्‍यहाँका प्रभुमा विश्‍वास गर्ने सबै दाजुभाइ, दिदी-बहिनी र केटा-केटीहरूसमेत हामीहरूलाई सहरबाहिरसम्‍म पुर्‍याउन आए। हामीहरू सबैले समुद्रको किनारमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्‍यौं।
“त्‍यहाँबाट म यरूशलेम गएँ अनि मन्‍दिरमा प्रार्थना गर्दागर्दै ध्‍यान-मग्‍न भएँ र
पावलले भने, “थोरै कुराले होस् या धेरैले— यी मेरा हातमा लगाइएका साङ्लाहरू बाहेक— हजुर मात्रै होइन, तर हजुरहरू सबै मजस्‍तै भइदिए हुन्‍थ्‍यो। यही म परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्छु।”
त्‍यस बेला पब्‍लियसका बुबालाई ज्‍वरो आएको र आउँ परेको थियो। त्‍यसो हुँदा पावल पब्‍लियसको बुबाको कोठामा गए अनि प्रार्थना गरेर आफ्‍ना हात बिरामीमाथि राखेपछि उनी निको भए।
उहाँकै पुत्रको सुसमाचार सुनाएर म हृदयदेखि नै उहाँको सेवा गर्दछु। मैले तिमीहरूलाई माया मारेको छैनँ तर सधैँ तिमीहरूका लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। मैले भनेको कुरा साँचो हो भनेर परमेश्‍वर आफैंले गवाही दिनुहुन्‍छ।
पवित्र आत्‍माले हामीलाई कमजोरी अवस्‍थामा सहायता गर्नुहुन्‍छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, हामीलाई थाहा नहुँदा पवित्र आत्‍मा आफैंले शब्‍दले भ्याउनै नसक्‍ने गहिरो सुस्केरामा हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्‍छ।
दाजुभाइहरू हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍ट र उहाँको आत्‍माले दिनुभएको प्रेमको कारणले मेरो कष्‍टमा सहायता गरून् भनी मेरो निम्‍ति परमेश्‍वरसँग जोड-तोडले प्रार्थना गरिदिनुहोला भनी म बिन्‍ती गर्दछु।
यहूदामा भएका अविश्‍वासीहरूबाट मलाई जोगाउन अनि यरूशलेममा हुने मेरा काम ख्रीष्‍टका पवित्र जनहरूलाई मन पर्दो होस् भनेर पनि प्रार्थना गरिदेओ।
१ कोरिन्थी ७:५
एक-अर्कालाई इन्‍कार नगर। केही समयका लागि सल्‍लाह गरेर प्रार्थना गर्न अलग बसे पनि अरू बेलाचाहिँ सँगै होऊ। नत्रता तिमीहरूले मन थाम्‍न नसके शैतानले फसाउने मौका पाउनेछ।
१ कोरिन्थी ११:४
टाउको छोपेर प्रार्थना वा अगमवाणी बोल्‍ने (अर्थात् परमेश्‍वरको तर्फबाट बोल्‍ने) पुरुषले आफ्‍नो शिर ख्रीष्‍टको बेइज्‍जत गर्छ।
१ कोरिन्थी ११:५
आफ्‍नो टाउको नछोपी प्रार्थना गर्ने र अगमवाणी बोल्‍ने स्‍त्रीले लोग्‍नेको बेइज्‍जत गर्छे। त्‍यस्‍ती स्‍त्री त कपाल खौरेकी स्‍त्रीजस्‍तै हो।
१ कोरिन्थी ११:१३
आफैं विचार गर, के स्‍त्रीलाई टाउको नछोपी परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्न सुहाउँछ?
१ कोरिन्थी १४:१३
त्‍यसकारण अन्‍य भाषा बोल्‍नेले बुझ्‍ने भाषामा अर्थ खोल्‍ने वरदानका लागि प्रार्थना गरोस्।
१ कोरिन्थी १४:१४
यदि म अन्‍य भाषामा प्रार्थना गर्छु भने मेरो आत्‍माले प्रार्थना गर्छ, तर मेरो मनले यसमा भाग लिंदैन।
१ कोरिन्थी १४:१५
त्‍यसो भए के गर्ने? म आत्‍मामा प्रार्थना गर्छु र म मनमा पनि प्रार्थना गर्छु। म आत्‍मामा गाउँछु र म मनमा पनि गाउँछु
१ कोरिन्थी १४:१७
तिम्रो धन्‍यवादको प्रार्थना असाध्‍यै राम्रो भए तापनि यसले अरू मानिसलाई फाइदा दिंदैन।
२ कोरिन्थी १:११
यसको लागि तिमीहरूको प्रार्थनाको सहायता हामीलाई चाहिन्‍छ। यसरी प्रार्थना गर्दा हाम्रा निम्‍ति चढाएका धेरै प्रार्थनाहरूको उत्तरमा परमेश्‍वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र धेरैले हाम्रो लागि धन्‍यवाद दिनेछन्।
२ कोरिन्थी ९:१४
परमेश्‍वरले यति ठूलो अनुग्रह तिमीहरूलाई देखाउनुभएको हुनाले तिनीहरूले गहिरो माया गरेर तिमीहरूका लागि प्रार्थना गर्नेछन्।
२ कोरिन्थी १३:७
हामीले त तिमीहरूले खराब काम गर्नुनपरोस् भनेर परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्दै छौं। हामीले यो प्रार्थना आफैंलाई राम्रो देखाउन होइन, तर हामी काम नलाग्‍ने नै देखिए पनि तिमीहरूले ठीकठीक काम गर्न सक भनेर प्रार्थना गर्दछौं
२ कोरिन्थी १३:९
हामीचाहिँ केही गर्न नसक्‍ने कमजोर तर तिमीहरूचाहिँ जे पनि गर्न सक्‍ने बलिया भएकामा हामी खुसी नै छौं अनि तिमीहरू सिद्ध बन्‍न सक भनेर हामीहरू प्रार्थना पनि गर्छौं।
परमेश्‍वरलाई म सधैँ धन्‍यवाद चढाइ नै रहन्‍छु। म तिमीहरूलाई प्रार्थनामा सम्‍झिनेगर्दछु।
प्रभु येशू ख्रीष्‍टका परमेश्‍वर, सम्‍मान्‌को योग्‍य पिताले तिमीहरूलाई पवित्र आत्‍मा देऊन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। आत्‍माले तिमीहरूलाई ज्ञानी बनाउनुहुनेछ र परमेश्‍वरलाई पनि तिमीहरूकहाँ प्रकट गरिदिनुहुनेछ र तिमीहरूले उहाँलाई चिन्‍नेछौ।
उहाँको ज्‍योति पाउन तिमीहरूका हृदयको आँखा खुलून् भनी म प्रार्थना गर्दछु र तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि कत्रो आशाको लागि उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनुभयो र ख्रीष्‍टका पवित्र जनहरूमा उहाँले पाउनुहुने हकको सम्‍मान् कति ठूलो छ।
ख्रीष्‍टमा विश्‍वास गर्नेहरूको लागि काम गर्ने उहाँको ठूलो शक्ति अनुमानै गर्न सकिंदैन भनी तिमीहरूलाई थाहा होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु।
त्‍यसैकारण म परमेश्‍वर पिताका पाउमा परेर प्रार्थना चढाउँछु।
उहाँको महान् सम्‍पत्ति र उहाँकै आत्‍माबाट तिमीहरूलाई शक्ति मिलोस् र त्‍यो शक्तिले तिमीहरूलाई भित्री जीवनमा बलियो बनाओस् भनी परमेश्‍वरलाई म प्रार्थना गर्दछु।
तिमीहरूले विश्‍वास गर अनि ख्रीष्‍टले तिमीहरूको हृदयमा बास गरिरहून् भनी म प्रार्थना गर्छु। तिमीहरूले हाल्‍ने जरा र तिमीहरूको जग प्रेम नै होस् भन्‍ने म प्रार्थना गर्दछु।
सधैँ प्रार्थना गर, परमेश्‍वरको सहायता मागिबस। सबै समय पवित्र आत्‍माको शक्तिमा प्रार्थना गरिबस। यी कुरा मनमा राखी सधैँ होशियार भएर लगातार प्रार्थना गर र ख्रीष्‍टका पवित्र जनहरूका लागि प्रार्थना गर।
मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदेओ र म बोल्‍न लाग्‍दा परमेश्‍वरले मलाई वचन देऊन्, मलाई बोल्‍ने साहस मिलोस् अनि म सुसमाचारको रहस्‍य अरूलाई बुझाउन सकूँ।
यही सुसमाचारको लागि नै म प्रेरित बनाइएको हुँ। प्रार्थना गरिदेओ र म कैद भए पनि मैले जसरी बोल्‍नुपर्ने हो, त्‍यसरी नै साहससँग बोलिरहन सकूँ।
सधैँ तिमीहरू सबैको लागि प्रार्थना गर्दा म खुसीसाथ प्रार्थना गर्छु
मेरो प्रार्थना छ, तिमीहरूको प्रेम बढ्दै-बढ्दै जाओस्। यो प्रेम दुवै सत्‍य ज्ञान र राम्रो-नराम्रो केलाउने बुद्धिमा बढ्दै जाओस्।
किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरूको प्रार्थना र प्रभु येशू ख्रीष्‍टका आत्‍माले दिनुभएको सहायताले मैले छुटकारा पाउनेछु।
हामी तिमीहरूका लागि प्रार्थना गर्दा परमेश्‍वर, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका पितालाई सधैँ धन्‍यवाद चढाउँछौं
यो कुरा सुनेदेखि नै हामीले तिमीहरूको लागि सधैँ प्रार्थना गर्दैआएका छौं। पवित्र आत्‍माले दिने पूरा ज्ञान र समझले परमेश्‍वरको पूरा इच्‍छा जान भन्‍ने नै हाम्रो प्रार्थना छ।
परमेश्‍वरको ठूलो शक्तिको भण्‍डारबाट आएको शक्ति पाएर तिमीहरू बलियो होओ भन्‍ने हाम्रो प्रार्थना छ। त्‍यसो भए तिमीहरूले सबै कुरा खुसीले दिगो भएर सहन सक्‍नेछौ।
तिमीहरू प्रार्थनामा निरन्‍तर लागि रहो। प्रार्थना गर्दा धन्‍यवाद दिंदै परमेश्‍वरमा मन लगाएर प्रार्थना गर।
मैले सुसमाचार प्रचार गरेकोले म थुनामा परेको छु। अब ख्रीष्‍टको रहस्‍य बताउन र उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्न परमेश्‍वरले हाम्रो लागि राम्रो ढोका खोलिदेऊन् भनी हाम्रो लागि प्रार्थना गर।
मेरो लागि तिमीहरूले प्रार्थना गरिदेओ, मैले जसरी बुझाउनुपर्ने हो, त्‍यसरी नै म बोल्‍न सकूँ।
तिमीहरूकै एक जना भाइ, ख्रीष्‍ट येशूका कमारा इपाफ्रासले अभिवादन पठाएका छन्। उनले सधैँ तिमीहरूको लागी खुरन्‍धार प्रार्थना गरिरहन्‍छन्। तिमीहरू परमेश्‍वरको इच्‍छा पूर्णरूपमा मान्‍ने भएर दिगो, पाको र पूरा विश्‍वासी होओ भन्‍ने उनको प्रार्थना छ।
हामीहरू तिमीहरू सबैका लागि परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद दिन्‍छौं र सधैँ प्रार्थना गर्दा पनि तिमीहरूलाई सम्‍झनेगर्छौं।
१ थिस्सलोनिकी ३:१०
तिमीहरूसँग भेट हुन सकोस् भनेर हामीले रातदिन परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं। भेट हुन पाए तिमीहरूका विश्‍वासमा जेजे कुराको कमी छ, त्‍यो पूरा हुन सक्‍ने थियो।
१ थिस्सलोनिकी ५:१७
१ थिस्सलोनिकी ५:२५
दाजुभाइहरू, हाम्रा लागि पनि प्रार्थना गरिदेओ।
२ थिस्सलोनिकी १:११
यसैकारण परमेश्‍वरले जुन जीवनको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ, त्‍यसको योग्‍य बनाउन र उहाँको शक्तिले राम्रो गर्ने इच्‍छा र विश्‍वासका काम पूरा गर्न सहायता गरून् भनी हामी प्रार्थना गर्छौं।
२ थिस्सलोनिकी ३:१
आखिरमा दाजुभाइहरू, हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदेओ, यसो गर्नाले तिमीहरूका बीचमा भएझैँ प्रभुको सुसमाचार चारैतिर चाँडै फैलिएर यसको ठूलो आदर हुनेछ।
१ तिमोथी २:१
अब सबैभन्दा पहिले म भन्‍छु, सबै मानिसहरूका लागि नम्र निवेदन, प्रार्थना, अन्तर्बिन्‍ती र धन्‍यवाद पनि चढाउने गर।
१ तिमोथी २:२
राजाहरू र सरकारी मानिसहरूका लागि पनि प्रार्थना गर्ने गर। त्‍यसो भए हामी सुखशान्‍तिको जीवनले पूरा समय परमेश्‍वरकै भक्ति र ध्‍यानमा लाग्‍न सक्‍नेछौं।
१ तिमोथी २:८
पुरुषहरूले रिस र शङ्का नलिई निर्दोष हात उठाएर प्रार्थना गरून् भन्‍ने मेरो इच्‍छा छ।
१ तिमोथी ४:५
किनभने परमेश्‍वरको शिक्षा र प्रार्थनाले नै त्‍यसलाई चोखो तुल्‍याउँछ।
२ तिमोथी १:३
मेरो शुद्ध विवेकसँग म मेरा पितापुर्खाले गरेझैँ परमेश्‍वरको काम गर्न आएको छु। उही परमेश्‍वरलाई तिम्रै सम्‍झनामा रातदिन प्रार्थना गर्दा धन्‍यवाद दिन्‍छु।
फिलेमोन भाइ, मैले प्रार्थना गर्दा तिमीलाई सम्‍झेर मेरा परमेश्‍वरलाई सधैँ धन्‍यवाद दिन्‍छु।
तिम्रो विश्‍वासको संगतिले हामी ख्रीष्‍टमा रहँदा हामीमा हुने सबै असल कुरालाई गहिरोसँग बुझ्‍ने शक्ति देओस् भनी प्रार्थना गर्छु।
यसको साथसाथै अर्को कुरो, तिमीहरूको प्रार्थनाले म पनि तिमीकहाँ आउन पाऊँला भन्‍ने आशा राखेको छु र मेरो लागि पनि बस्‍ने ठाउँ मिलाइदेओ।
येशू आफ्‍नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा आफूलाई मरेकोबाट बचाउन सक्‍नुहुनेसँग रुँदै आँसु बगाएर बिन्‍ती र प्रार्थना चढाउनुभयो। उहाँको नम्रता र भक्तिले गर्दा नै परमेश्‍वरले उहाँको प्रार्थना सुन्‍नुभयो।
यसैकारण येशूमा विश्‍वास गरेर परमेश्‍वरकहाँ आउनेहरूलाई उहाँले अहिले र सधैँभरिका लागि बचाउन सक्‍नुहुन्‍छ किनभने तिनीहरूका लागि परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर्न उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्‍छ।
हाम्रो लागि प्रार्थना गर्न नछोड। हामीलाई विश्‍वास छ, हाम्रो भित्री मन चोखो छ किनभने हामी सधैँ राम्रो काम गर्न मात्र चाहन्‍छौं।
परमेश्‍वरले मलाई छिट्टै तिमीहरूसँग भेट गर्ने मौका देऊन् भनी प्रार्थना गरिदेओ भनेर बिन्‍ती गर्दछु।
के तिमीहरूमध्‍ये कोही समस्‍यामा छ? उसले प्रार्थना गरोस्। कोही आनन्‍दित छ? उसले प्रशंसाको गीत गाओस्।
कोही बिरामी छ? उसले मण्‍डलीका गुरुहरूलाई बोलाओस् अनि उनीहरूले प्रभुको नाउँमा तेलले अभिषेक गरेर उसको लागि प्रार्थना गर्नेछन्।
विश्‍वाससँग गरेको प्रार्थनाले बिरामी निको हुन्‍छ अनि प्रभुले उसलाई बिसेक पार्नुहुन्‍छ। उसले पाप गरेको छ भने क्षमा पाउनेछ।
निको हुन आफूले गरेको पाप एक-अर्काको अघि मानिलेओ अनि एक-अर्काको लागि प्रार्थना गर। परमेश्‍वरको अघि ठीक ठहरिएका मानिसले गरेको प्रार्थना शक्तिशाली हुन्‍छ र यसले ठूलो काम गर्न सक्‍छ।
एलिया पनि हामीजस्‍तै मानिस थिए। तीन वर्ष छ महिनासम्‍म वर्षा नहोस् भनी उनले प्रार्थना गर्दा पानी परेन।
फेरि उनले प्रार्थना गरे अनि पानी पर्‍यो, पृथ्‍वी हराभरा भयो।
१ पत्रुस १:१७
प्रार्थना गर्दा तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई पिता भनी पुकार्छौ। उहाँले सबै मानिसको आ-आफूले गरेको कामअनुसार पक्षपात नगरी न्‍याय गर्नुहुन्‍छ। यसैले पृथ्‍वीमा रहुञ्‍जेल उहाँको आदर गर्ने तिमीहरूको जीवन होस्।
१ पत्रुस ३:७
लोग्‍नेहरूले पनि आफ्‍ना स्‍वास्‍नीहरू कमजोर हुन्‍छन् भन्‍ने बिर्सनुहुँदैन। तिमीहरूले उनीहरूको इज्‍जत राख्‍नुपर्छ किनभने तिनीहरूले पनि तिमीहरूको साथसाथै परमेश्‍वरको जीवनदान पाउनेछन्। यसरी तिमीहरूको प्रार्थनामा कुनै किसिमको बाधा नआओस् भनेर एकले अर्कासँग राम्रो व्‍यवहार गर्ने गर।
१ पत्रुस ३:१२
किनभने प्रभुले त आफ्‍ना अघि ठीक हुनेलाई नै हेर्नुहुन्‍छ अनि तिनीहरूको प्रार्थना सधैँ सुन्‍ने गर्नुहुन्‍छ। तर नराम्रो गर्नेलाई पिठ फर्काउनुहुन्‍छ।
१ यूहन्ना ५:१६
कसैले आफ्‍नो भाइलाई मृत्‍युमा नपुर्‍याउने पाप गरिरहेको देख्‍छ भने परमेश्‍वरसित प्रार्थना गरिदेओस् र परमेश्‍वरले उसलाई जीवन दिनुहुनेछ। तर योचाहिँ मृत्‍युमा नपुर्‍याउने पाप गर्नेको लागि मात्र हो। मृत्‍युमा पुर्‍याउने पाप पनि छ। तर म तिमीहरूलाई यसको लागि प्रार्थना गर्न भन्‍दिनँ।
३ यूहन्ना १:२
प्रिय भाइ, तिम्रा सबै कुरा राम्रा हुन् भनेर प्रार्थना गर्छु। तिम्रो आत्‍माजस्‍तै शरीर पनि निरोगी होस्।
तर प्रियहरू, तिमीहरूचाहिँ पवित्र विश्‍वासमा बलियो भएर बढ्दै जाओ। पवित्र आत्‍माको शक्तिमा रहेर प्रार्थना गर।
त्‍यति नै खेर ती चारवटा जीवित प्राणीहरू र चौबीस जना धर्म-गुरुले थुमाको चरणमा दण्‍डवत् गरे। प्रत्‍येकको हातमा एउटा वीणा र धूपको सुबासनाले भरिएको सुनको बटुको थियो। ती धूपका बास्‍नाचाहिँ परमेश्‍वरका भक्तहरूका बिन्‍ती-प्रार्थनाहरू हुन्।
सुनको धुपौरो बोकेको अर्को एक जना स्‍वर्गदूत आएर वेदीनेर उभिए। परमेश्‍वरका भक्तजनका प्रार्थनासँग सिंहासन अघिको सुनको वेदीमा चढाउन उनलाई धेरै सुगन्‍धित धूप दिइएको थियो।
परमेश्‍वरको अगाडि खडा रहेका स्‍वर्गदूतका हातबाट जलिरहेका धूपको धुवाँ परमेश्‍वरका भक्तजनहरूका बिन्‍ती-प्रार्थनाहरूसँग उँभो उठिरहेको थियो।